IChilli Boys idlulele kweyandulela owamanqamu kwiNedbank Cup - Impempe
IChilli Boys idlulele kweyandulela owamanqamu kwiNedbank Cup
March 13, 2021 Impempe.com
UBayzel Goldstone weRichards Bay no-Augustine Kwem weChippa United
Igcine ikutholile ukujabula iChippa United ngemuva kokushaya iRichards Bay FC ngo 2-1 emdlalweni we-quarterfinal yeNedbank Cup, eSisa Dukashe Stadium, eMdantsane, ngoMgqibelo ntambama.
Izinto aziyihambeli neze kahle iChilli Boys emidlalweni yeDStv Premiership. Isendaweni ka-13 kwi-log kanti ikuthola kunzima kakhulu ukuwina ukuze iqoqe amaphuzu abalulekile. Emidlalweni emithathu edlule yeligi iChippa ibambane neCape Town City ngo 0-0, yashaywa yi-Orlando Pirates ngo 3-0, yase igcina ngokushaywa AmaZulu FC ngo 1-0. Yonke le midlalo ibiyidlalela ekhaya.
Nasemdlalweni wayizolo bekungaziwa ukuthi iChilli Boys izodlala kanjani ngoba izinto azihlangani kahle yize ibisidlalela ekhaya umdlalo wesine kulandelana.
INatal Rich Boyz ayiwuqalanga kahle neze umdlalo njengoba yenze iphutha eliholele ekutheni kungene igoli ngomzuzu wesihlanu. Umdlali wasemuva weBay, uMoses Mthembu, ubezama ukuphasa ibhola emuva kodwa lahlangana no-Anthony Laffor walibeka phakathi.
Ngemuva kwalokho izivakashi zizamile ukuziqoqa, zabeka umoya phansi, zaphaselana kangcono. Lokhu kuholele ekutheni ibe yingozi kakhulu iBay uma iya phambili, futhi ibisikwazi ukugcina ibhola isikhathi esiningi.
Isiwombe sesibili siqale kuyiBay ebizama ukuthola igoli lokulinganisa kodwa bekuhlale kunengozi kuyona uma iya phambili ngoba ibishiya kuvulekile emuva. Nokho kubuye kwacaca esiswini ukuthi iChilli Boys inamava angcono ngoba ibiwawina amabhola abalulekile, kuyiyona futhi ebiyinhle uma ihlasela.
Ngomzuzu ka-58 kugcine konakele kwiRich Boyz njengoba uMaloisane Mokhele eshaye igoli lesibili leChippa kwacaca ukuthi sekonakele kubafana baseBay. IBay ayililahlanga ithemba njengoba kuthe ngomzuzu ka-90 uSiyabonga Vilane washaya igoli elenze kwaba ngu 2-1. Nokho imizuzu emithathu eyengeziwe ibinganele ukuthi iBay ithole elokuyisa umdlalo esikhathini esengeziwe.
Ukuwina kweChilli Boys kuyifake kweyandulela owamanqamu weNedbank Cup kodwa akungabazeki ukuthi abaphathi nomqeqeshi uDan Malesela basafuna yenze kangcono emidlalweni yeligi, ukuze igweme izembe.
UMalesela unomlando omuhle kakhulu kwiNedbank Cup njengoba eke wayiwina neTS Galaxy eshaya iKaizer ngo 1-0 kowamanqamu ngo-2019, eMoses Mabhida Stadium. NgeSonto izoqhubeka imidlalo yeNedbank Cup kanti oweMamelodi Sundowns nePirates uyoze udlalwe ngo-Ephreli 15, ngenxa yokuxineka kwala amaqembu emidlalweni yeCAF.
Previous Previous post: UShalulile utholele iDowns amaphuzu aphelele eKapa
Next Next post: Kuyabasabisa abaqeqeshi beSundowns ‘ukundiza’ kukaShalulile